Seriesdroid S2, ny fampiharana tsara indrindra hijerena andian-tsarimihetsika maimaim-poana | Androidsis
[APK] Fanadihadiana lalina momba ny Seriesdroid S2, ny fampiharana tsara indrindra hijerena andian-tsarimihetsika maimaim-poana
Raha ora vitsy lasa izay dia nanao a famerenana Pelisdroid S2 feno, izao dia anjaran'ny fampiharana ny mifanila aminy natokana ho an'ny laharana fahitalavitra. Ny fampiharana dia tsy misy hafa fa Seriesdroid S2 na ilay ho an'ny maro dia ny fampiharana tsara indrindra hijerena andian-tsarimihetsika maimaim-poana avy amin'ny terminal Android.
Rehefa asehoko anao amin'ilay horonan-tsary mifamatotra izay nanombohanay ity lahatsoratra ity famerenana feno ny Seriesdroid S2, horonantsary noforoninay manokana izay anorotananay tanteraka ny lafiny rehetra amin'ny fampiharana hampisehoana aminao izay rehetra azonay omena maimaim-poana, amin'ny alàlan'ny fanindriana fotsiny «Tohizo ny famakiana ity lahatsoratra ity», kely etsy ambany dia hahita rohy mivantana ianao hampidinana ny apk farany an'ny Seriesdroid S2 ary koa ny fomba fametrahana azy amin'ny Android terminal ary tsy mila Root na zavatra toy izany, misintona, mametraka ary mankafy fotsiny.
1 Aiza no ahafahako misintona Seriesdroid S2?
2 Ahoana ny fametrahana Seriesdroid S2
3 Izay rehetra omen'ny Seriesdroid S2 anay
Aiza no ahafahako misintona Seriesdroid S2?
seriesdroid Azo alaina mivantana avy ao ny pejin-tranonkalanao manokana amin'ny alàlan'ny fanindriana io rohy io ihany. Apk iray izay mametraka azy fotsiny araka ny ilazako kely etsy ambany, aorian'ny fampiharana voalohany azy dia angatahina hanavao ny kinova farany misy azy izahay, kinova miasa iray feno ary efa novaina ilay anarana Seriesdroid S2.
Raha vao havaozina ny fampiharana, raha mankany amin'ny vatasarihana fampiharana an'ny Android isika dia ho afaka hanamarina fa manana ilay rindranasa dika mitovy isika, iray misy ny anaran'ny Seriesdroid ary ilay kinova nohavaozina indrindra miaraka amin'ny anaran'ny Seriesdroid S2. Mora ny manamboatra izany esory ilay kinova antsoina hoe Seriesdroid.
Ahoana ny fametrahana Seriesdroid S2
Para mametraka Seriesdroid S2Amin'ity tranga ity, ny kinova izay ny anarany dia Seriesdroid, izay ilay apk azontsika sintonina avy amin'ny pejin-tetikasa ofisialy, dia ho ampy ny misintona ny apk ary alohan'ny tsindrio ny fampandrenesana fampidinana, mandehana any amin'ny fikirana amin'ny Android ary avy amin'ny Safidy fiarovana no ahafahana mamela ny safidy mamela antsika hametraka fampiharana avy amin'ny loharano tsy fantatra na fampiharana avy amin'ny loharano tsy fantatra. Raha vantany vao vita izany, dia ho afaka tsindrio ilay fampandrenesana fampidinana mahomby na izy, raha tsy mahomby izany, mankanesa any amin'ny làlan'ny fampidinana, toy ny fitsipika ankapobeny ny fampirimana fampirimana ny fahatsiarovana anatiny ny Android antsika ary tsindrio ny rakitra apk mihitsy teo aloha alaina.
Ity dia hanokatra ny installer automatique ny fonosana Android handehanana amin'ny fametrahana ny Seriesdroid amin'ny fitaovantsika. Avy eo, araka ny efa noresahiko teo aloha, rehefa mihazakazaka voalohany ny fampiharana izahay dia hampandrenesina fa misy ny kinova vaovao vaovao nohavaozina, amin'ny fanekena ny fampandrenesana mipoitra tampoka izay miseho eo amin'ny efijery Android-nay fotsiny ny fampidinana ny kinova Seriesdroid vaovao dia hanomboka, kinova nanovana ny anarany Seriesdroid S2 ary miasa tanteraka izy io ary manana fiasa vaovao be dia be ary manampy fampiasa toy ny hoe afaka miditra amin'ny alàlan'ny kaonty Facebook-tsika mba hampifanarahana ny rindranasa amin'ireo fitaovana Android rehetra napetrakay.
Izay rehetra omen'ny Seriesdroid S2 anay
Seriesdroid S2 manolotra antsika fidirana feno avy amin'ny rindranasa tokana mankany amin'ny maro pejy natokana manokana amin'ny fizarana rakitra an-tsary mifanaraka amin'ny andian-tsarimihetsika fahitalavitra tsara indrindra. Andian-televiziona hijerena maimaimpoana amin'ny Android amin'ny maody mivantana na koa ampidino ireo rakitra hijerena isaky ny mila izany ary tsy misy fifandraisana Internet.
Ireo pejy na serivisy mikoriana ao dia Seriesdroid S2 ao amin'ny kinova farany farany ofisialy sy farany an'ny fampiharana dia ireto manaraka ireto:
Raha amin'ity lisitra be pejy ity izay misy ary azo idirana amin'ny fampiharana iray ihany, dia ampianay miasa toy ny fanohanana feno ny Chromecast na DLNA, ny mety hanampiana andian-tantara amin'ny tiana, ny mety hanamarihana ireo toko efa hitanao na ny mety ho fahafaha-manao. mampidina ireo toko tianay mivantana amin'ny terminal Android anay hijerena azy ireo amin'ny fotoana rehetra ary tsy mila fifandraisana Internet mavitrika, dia rehefa tsapantsika ny fampiharana manaitra izay napetrakao amin'ny Android ary nahoana ny maro no mieritreritra fa ny fampiharana tsara indrindra hijerena andian-tsarimihetsika maimaim-poana amin'ny Android.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » apk » [APK] Fanadihadiana lalina momba ny Seriesdroid S2, ny fampiharana tsara indrindra hijerena andian-tsarimihetsika maimaim-poana
Raha ny marina, ny andiany Droid aloha, avy eo ny andiany Droid S, ankehitriny dia novainy ho s2 izay tsy manampy fiasa vaovao ary raha vao jerena dia nanova kely ny famolavolana ny fampiharana fotsiny izy ireo (raha ny tsiroko, niova ratsy kokoa izy io ). Raha fintinina, io no fampiharana fialamboly misy anao hatramin'ny nahalalako azy taloha elabe.
Salama aho manandrana miditra amin'ny app ary tsy afaka manana hatramin'ny omaly ary tsy misy na amin'ny fitaovana maro, azafady mba amboary izany
Faly aho amin'ny andian-drahona izay miasa amin'ny alina ary misintona programa sy andiana tsy azoko arahana.
Mamaly an'i Angeles
Satria nohavaozina ilay rindranasa, tsy avelany hiditra akory aho ary rehefa te hisoratra anarana dia mahazo hadisoana foana, inona no mitranga amin'ilay application? Tsy mandeha intsony ve izany?
Denis dia hoy izy:
Salama Lola, efa fanavaozana roa izahay ary very ny zava-drehetra na namela ahy hiditra aza ary rehefa mandefa na mametraka kinova hafa aho, dia mahalana vao misokatra raha fantatrao ny vahaolana, ampahafantaro ahy ny arahaba
Valiny tamin'i Denis
YouTube Go, ny fampiharana Google ofisialy hisintona horonantsary YouTube
Sintomy ny pejin-tranonkala iray manontolo ankehitriny miaraka amin'ny kinova Chrome vaovao